Yurub oo lagu Arkay Coronaha Cusub ee ka Bilowday South Africa
[ January 22, 2022 ] Maraykanka oo ka digay ‘cawaaqib ka dhalan kara’ haddii Ruushku soo galo Ukraine	Wararka Caalamka
HomeWararka CaalamkaYurub oo lagu Arkay Coronaha Cusub ee ka Bilowday South Africa
November 27, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Wasiirka Caafimaadka Belgian Frank Vandenbroek ayaa shir jaraa’id oo uu maanta qabtay ku sheegay in kiis ku saabsan Coronaha Cusub laga arkay Belgium, kaasi oo noqonaya kiiskii ugu horreeyay ee lagula arkoYurub.
Qofka cudurka qaba lagama tallaalin Corona. Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan in uu dibadda ka yimid iyo in kale, iyo dalka uu u safray. Sida laga soo xigtay Aftonbladet.
Coronaha cusub , marka hore laga helay Botswana, South Africa, Khubaradu waxay ka cabsi qabaan in Dadka Talaalka Qaba aysan u Adkeysan karin.
Guddiga Midowga Yurub ayaa ku baaqay in la mamnuuco safarka hawada ee ka imaanaya dalalka Koonfurta Afrika. intaasi kadib Britain, Germany iyo Italy ayaa horay uga jawaabay, iyagoo joojiyay socdaalkii lix dal oo Afrikaan ah.
Nooc cusub oo coronavirus ah oo la yiraahdo “NY” (sida ku cad alifbeetada Giriigga) ayaa si degdeg ah ugu faafaya Afrika. Waxa uu gabi ahaanba ka duwan yahay fayraska Corona ee asalka ahaa oo markii ugu horreysay laga helay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha.
Koonfur Afrika waxay diiwaangelinaysay ilaa 200 oo xaaladood oo la xaqiijiyey oo ah korona maalin kasta, laakiin tirada la diiwaan geliyey ayaa aad kor ugu kacday shalay, Khamiista, ilaa 2500 xaaladood.
Jimcihii, dawladda Britain waxay hakisay soo gelista lix waddan oo Afrikaan ah: Koonfur Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho iyo Eswatini. Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa qaaday tallaabooyin la mid ah. Halka wadamada ay Denmark ka mid tahay ay adkeeyeen shuruudaha gelitaanka dadka safarka ah ee ka imaanaya wadamadaas.
Mid ka mid ah khabiirada ayaa ku tilmaamay isbeddelka cusub inuu yahay “kii ugu xumaa ee aan aragnay ilaa hadda”, sida ay sheegtay BBC-da.
Hay’ada Caafimaadka Sweden oo badashey Sharciyada Karantiilka iyo Kuwa Shaqooyinka ee Dadka Xanuunka Qaba